Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, falanqaynta qiimaha iyo astaamaha | Wararka gadget
Badeecadaha guriga ee ku xiran Xiaomi waxay noqdeen kuwo caan ah sababtuna tahay xiriirkooda dhow ee u dhexeeya tayada iyo qiimaha, astaanta astaanta ee dhammaan qeybaheeda. Marka loo eego nalalka caqliga leh, ma yaraan karto, oo markan waxaan kuu soo qaadanaynaa mid ka mid ah badeecadaha ugu caansan.
Waxaan eegeynaa Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, oo ah laambad isku -dhafan oo aad ula jaanqaadaysa kaaliyeyaasha dalwaddu ee kala duwan. Lambarkii Miisaanka Miiska 2 ee Xiaomi wuxuu durbaba saaran yahay miiska falanqaynta waxaanan kuu sheegi doonnaa wixii khibraddeennu ahayd leh alaabtan gaarka ah oo dhammaystiran.
2.1 Isdhexgalka Amazon Alexa
2.2 Dhexgalka Apple HomeKit
3 Dejinta iyo shaqooyinka
5 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
Jiilka labaad Xiaomi Mi Bedside Lamp wuxuu leeyahay naqshad warshadeed oo caddaalad ah waana fududahay in lala qabsado ku dhawaad ​​qol kasta. Waxay leedahay dherer 20 sentimitir iyo ballac ah 14 sentimitir, naqshad isku dhafan oo fudud oo hubinaysa inay ku bixin karto iftiin 360-degree spectrum. Dhabarka waxaa ku yaal isku xiraha korontada iyo xagga hore oo leh saddex badhan. Waxaad ku haysataa qiimaha ugu fiican Amazon haddii aad xiisaynayso inaad iibsato.
Caag cad oo Matt ah oo saldhig u ah iyo cad cad oo aagga u xilsaaran iftiiminta iftiinka. Badeecadu way fududahay in "lagu haboonaado" qolal kala duwan, sidaa darteed maahan inaan ku adkaysanno isticmaalkeeda sida miiska sariirta.
Sida had iyo jeer, badeecadu waxay la timaaddaa buug-gacmeed degdeg ah oo si sahlan loo fahmi karo. Marka hore waxaan isku xiri doonnaa korontada oo waxaan sii wadnaa inaan ku xirno Lam Miiska dhinaceeda 2 si aan hadda ugu xirno korontada. Si otomaatig ah, iyada oo aan loo baahnayn waxqabadyo dheeri ah, waxaan dooneynaa inaan la shaqeyno dalabka Xiaomi Mi Home, oo loo heli karo Android iyo macruufka.
Markaan galno koontadayada Xiaomi, ama aan is -diiwaangelinay (si aad ah lagama maarmaan u ah) haddii aan lahayn koonto, waxaan dooneynaa inaan riixno badhanka "+" ee dhinaca midigta sare ee shaashadda. Dhowr ilbiriqsi gudahood ayaa la arki doonaa Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 oo aan hadda bilownay.
Waa inaan si fudud kuugu soo bandhignaa shabakad WiFi iyo furahaaga sirta ah. Waxaan halkaan uga digeynaa in Lam Miiska dhinaceeda Lamp 2 uusan la jaanqaadi karin shabakadaha 5 GHz. Kadib waxaan ku dari doonnaa qol gurigayaga dhexdiisa ah iyo sidoo kale aqoonsi qaab magac ah. Waqtigan xaadirka ah waxaan haysannaa Mi Bedside Lamp 2 ku dhawaad ​​isku dhafan, laakiin waa inaan xusuusnaano inaan si buuxda ula jaanqaadno Amazon Alexa iyo Google Home, marka waxaan ku dhammayn doonnaa isku -darka laydhka kaaliyayaasha dalwaddu jecel yihiin.
Isdhexgalka Amazon Alexa
Waxaan aadeynaa "Profile" geeska midig ee hoose, ka dibna waxaan ku sii soconnaa dejinta "adeegyada codka" oo waxaan doorannaa Amazon Alexa, halkaas waxaan ka heli doonnaa tillaabooyinka, kuwaas oo ah kuwa soo socda:
Geli dalabkaaga Alexa oo tag qaybta xirfadaha
Soo dejiso xirfadda Guriga Xiaomi oo ku gal isla koontada aad ku xirtay Lamp -ka Bedelka 2 ee Xiaomi
Guji "ogaanshaha aaladaha"
Lambarkaaga Xiaomi Mi Bedside Lamp wuxuu durbaba ka muuqdaa qaybta «nalalka» si aad u hagaajiso waxaad rabto
Dhexgalka Apple HomeKit
Waqtigan xaadirka ah tilmaamaha ayaa xitaa ka sahlan in la raaco marka loo eego kuwii aan u soo bandhignay isku xirka Amazon Alexa.
Markaad dhammayso dhammaan qaybta qaabeynta iyada oo loo marayo Xiaomi Home tag codsiga Apple Home.
Guji astaanta "+" si aad ugu darto qalab
Ku sawir lambarka QR -ka hoostiisa salka laambadda
Waxaa si otomaatig ah loogu dari doonaa nidaamkaaga Apple HomeKit
Tani, oo ay weheliso is -waafajinta Guriga Google, ayaa ka dhigaysa Mi Bedside Lamp 2 mid ka mid ah qiimaha ugu wanaagsan ee nalalka caqliga leh ee suuqa.
Dejinta iyo shaqooyinka
Waxay ku socotaa iyada oo aan la mahadin is dhexgalka kaaliyayaasha kala duwan ee Apple iyo Amazon waxaad awoodi doontaa inaad samayso otomaatig saacad ah ama nooc kasta oo kale oo toosin toos ah aad rabto. Marka lagu daro kor ku xusan, waxaan haysannaa dalabka Xiaomi Home kaas oo, iyo waxyaabo kale, noo oggolaan doona inaan:
Isku hagaaji midabka laambadda
Hagaaji midabka caddaanka
Abuur socodka midabka
Laambadda shid oo dami
Si kastaba ha ahaatee, Waqtigan xaadirka ah waa inaan sidoo kale diirada saarnaa kontaroolada gacanta ee aan muhiimka ahayn, Sababtoo ah si daacadnimo ah, ahaanshaha laambad miiska sariirta waxaa wanaagsan in aan ku haysanno xulashooyin fara badan taleefanka gacanta, laakiin mid ka mid ah adeegsigiisa ugu badan ayaa shaki la'aan noqon doona hagaajinta gacanta.
Taas awgeed waxaan ku leenahay nidaamka taabashada xarunta oo leh nalalka LED oo na siiya dhammaan fursadahaan:
Badhanka hoose wuxuu ka dhigi doonaa shaqada shididda iyo daminta duruuf kasta oo leh hal taabasho.
Siraha aagga dhexe wuxuu noo oggolaan doonaa inaan hagaajinno iftiin kala duwan oo ku habboon baahiyahayaga oo bixiya jawaab wanaagsan.
Badhanka sare ayaa noo oggolaan doona inaan hagaajinno hooska iyo midabada:
Markay bixinayso midab cad, sameynta taabasho gaaban waxay noo oggolaan doontaa inaan beddelno midabada kala duwan ee midabka ee naloo soo bandhigo qabow ilaa diirran
Haddii aan samayno saxaafad dheer waxaan awoodi doonnaa inaan isku beddelno habka cad iyo qaabka midabka RGB
Markay bixinayso qaabka midabka RGB, riixitaan gaaban oo ku yaal badhanka kore ayaa noo oggolaan doona inaan ku kala beddelno midabada kala duwan
Lambarkan Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 wuxuu cunaa 1,4 watts nasashada iyo 9,3 watts ee hawlgalka ugu badan, markaa waxaan u tixgelin karnaa "isticmaalka hoose". Sida awoodda iftiinka, waxaan helnaa xoogaa ka badan oo ku filan (iyo faro badan) 400 Lumens laambadda sariirta.
Fikradayda kama dambaysta ah ee ku saabsan Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 waa inaan u arko inay adag tahay inaan wax badan bixiyo badeecad aad ka iibsan karto inta u dhaxaysa 20 iyo 35 euro iyada oo ku xidhan barta iibka iyo dalabyada gaarka ah. Waxaan leenahay laambad aad isu habboon, oo leh astaamo aad ka filan karto, way adag tahay in la caddeeyo in aan lagu haysan guri ku xiran.
Miiska Sariirta Miiskiisa 2
Dib u eegida: Miguel Hernandez Gutierrez
Ku dhejiyay: 28 August 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 28 August 2021
Wuxuu u baahan yahay abuuritaanka koonto Xiaomi
Farqiga qiimaha ee meelaha iibka
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, falanqaynta qiimaha iyo astaamaha